Ungachinja sei Wi-Fi kubva kuControl Center neIOS 13 | IPhone nhau
Ungachinja sei Wi-Fi kubva kuControl Center neIOS 13
iOS 13 yave kuwanikwa se yeruzhinji beta iyo chero mushandisi yaanogona kuwana. Nekudaro, haisati yanyatsogadzikana uye ine zvikanganiso, saka kana iwe uchida kuti mudziyo wako ufambe mushe unofanira kugara paIOS 12. Zvitsva zveIOS 13 zvakawanda, kunyanya zvine chekuita neIPOSOS ine mabasa makuru ari mumhando nyowani dze hwendefa reApple.
Imwe yei zvitsva uye zvakamirirwa kwenguva refu maficha iOS 13 kugona chinja netiweki yeWi-Fi kana chinongedzo cheBluetooth chakabatana kubva kuControl Center, pasina kupinda mukati meZisetwa zvechigadzirwa chedu. Mushure mekusvetuka isu tinokuudza iwe kuti sei.
Chinja Wi-Fi nyore neIOS 13
Kumhanya kwakakosha muhurongwa hwekushandisa. Kana chishandiso chisina kutsetseka, hachitambe mifananidzo zvine simba uye zvinotora nguva yakareba kuti zviitwe, vashandisi vanozofinhwa nazvo uye zvinhu zviviri zvinogona kuitika: kuti ivo vanoshandura chigadzirwa kana kuti vanodzokera kuiyo yapfuura vhezheni (kana zvichikwanisika). iOS 13 inovavarira kuve ine simba, inokurumidza uye inoyerera vhezheni. Uye panguva ino zvinoita sekunge iri.
Imwe yezvinhu zvitsva zveIOS 13 ndiko mukana wekuwana mamenyu nekudzvanya kwechinguva zvese mukati mekushandisa nekunze. Iyi ndiyo mamiriro ebasa ratiri kutaura nezvaro nhasi: chinja netiweki yeWi-Fi kana chinongedzo cheBluetooth pasina kuwana iyo Zvirongwa zveIOS, zvese zvakananga kubva kuControl Center, nekuti:
Chinhu chekutanga, zvakafanira kuve neIOS 13 yakaiswa pane yedu kifaa. Saka kana iwe uri mugadziri, iwe unogona kuiisa kuburikidza neyako yekuvandudza profile. Zvikasadaro, iwe unogona kusaina kune yeruzhinji mabetas atove kuwanikwa kubva Iyi link.
Kana iwe uchitova neIOS 13 pane chako chishandiso, ingo svika iyo Control Center. Kusvetuka pasi kubva kumusoro kurudyi pane ese iPhone uye iPad.
Dhinda kwemasekondi mashoma pane iyo icon Wi-Fi o MAKARALI USB uye pakarepo runyorwa ruchaonekwa neweWi-Fi netiweki kana zvishandiso zveBluetooth zvinowanikwa kuti zvibatanidze. Kana iwe usati wambosangana neiyo network kana chishandiso, password kana pairing zvinopinda. Kana iwe uchitova neiyi data yakachengetedzwa, chishandiso chinobatana otomatiki uye iwe unozogona kutevedzera ako mabasa pane mudziyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ungachinja sei Wi-Fi kubva kuControl Center neIOS 13
Apple inotanga kutengesa iyo OneDrop glucose mita muzvitoro zvayo
Apple News + hausi iwo mugodhi wegoridhe uyo Apple yakavimbisa vaparidzi